I-CUCA, ibhayisekile yombane enokuthwala abakhweli ababini | Iindaba zeGajethi
Umhlaba wombane kwicandelo lezothutho ugcwele ngokupheleleyo. Kuyinyani ukuba kule mihla kunentetho engakumbi malunga nomhlaba weemoto ezinamavili ama-4, kodwa kuyinyani ukuba besikwibhayisikile kunye nezothutho zasedolophini iminyaka eliqela ngeendlela ezintle kakhulu. Ngoku sithetha ukubheja Spanish CUCA.
Ayinakwenza nto-esiyaziyo-kunye nenkampani edumileyo yokunkonkxa. I-CUCA yibhayisikile yombane ngokuzimela okuhle, ngoncedo lokuhamba ngenyawo kwaye ixabiso lalo alifikeleli kwi-1.500 euro. Kwakhona, njengenqaku elinomdla, iyakwazi ukuthwala abakhweli ababini.
Ingaziphatha njengesikuta sombane, kodwa ayikho enye into ngaphandle kwebhayisikile. Leyo yimpumelelo enkulu yokuqala yeCUCA, le bhayisekile inakho fikelela kuma-25 km / h kwaye inikezela nge Ukuzimela ukuya kuthi ga kwiikhilomitha ezingama-40 ngentlawulo enye. Kwangokunjalo, uya kuba nakho ukuhambisa umbulelo kuncedo lwabo ngokuhamba ngenyawo.
Okwangoku, ngokwenkampani, i-CUCA inebhetri egcwalisekayo efikelela kwisikhundla sayo esiphezulu emva kweeyure ezi-4 zokutshaja, nangona kunjalo ngeeyure ezi-2 kuphela uya kuba neepesenti ezingama-80 zokuzimela kwazo. Kwelinye icala, abakhweli ababini yile nto ibhayisekile yombane enokuhamba ngayo: ineendawo zokubamba iinyawo kunye nezibambo zaziwa njenge "package" okanye iqabane.
Kwelinye icala, xelela ukuba inayo iziqhoboshi idiskhi hydraulic kunye nezibane LED ngokupheleleyo. Kwaye i-CUCA ine-headlight ephambili kwaye ijika imiqondiso. Ngamanye amagama, siyakubonakala kakuhle-kwaye siya kuzenza sibone-kakuhle ebusuku. Kwakhona, kwaye njengoko sikuxelele kakuhle, uya konga ubhaliso, i-inshurensi kwaye ngaphezulu kwako konke, iindleko zepetroli.
Okokugqibela, kwindawo yokubamba siza kuba nayo Isikrini seLCD apho siza kunikwa lonke ulwazi: umgama ohanjiweyo, isantya sangoku apho sihamba khona kunye nemeko yentlawulo yebhetri. Lithini ixabiso lale bhayisekile yombane? Njengoko kuchaziwe kwiwebhusayithi yabo, ixabiso lililo 1.299 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-CUCA, ibhayisekile yombane enokuthwala abakhweli ababini